Semalt Expert: Sei Uye Sei Ungashandisa Amazon Kuvaka An E-Commerce Brand?
Nzvimbo yemakambani yeAmazon inoshandiswa senzvimbo apo vanhu vanotanga marara uye vakadzidzapamusoro pemitemo yevatengi. Inobatsira kutanga budding entrepreneurs. Bhizinesiwebusaiti inogona kuita zvakanaka kana ichienzaniswa nemusika. Kushandisa yemusika seimwe nzvimbo inowanikwa mari inowedzera kubatsirwa.
Unonzi Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt ,inotsanangura kushandisa Amazon kuti ibudirire e-commerce brand.
Usati wasvika pakuziva kukwana kwemusika, zvakanakira kutanga nezvidzidzo - fingerprint entry systems uk. Amazon mazano ekuwanikwa kwevatengi kumabhizimisi. Pakupedzisira, kana munhu akazoziva zvaanoshanda, chete ipapo anogona kugonasimba rekushandisa Amazon kukura marimi.
Amazon nhoroondo dze makumi mashanu nemaviri muzana dzekutsvaga. Mugore rechina re2016,Amazon yaive nemhosva ye makumi matanhatu kubva muzana yekutengeserana kwe e-commerce. Pakupedzisira, ruzhinji rwezvinhu zvakatengeswa papuratifomu dzinobva kune mumwe wechitatuvatengesi.
Nyaya idzi dzinoratidza kuti vazhinji vevatengi vanowanzotanga Amazon kutsvagazvigadzirwa. Nokudaro, kuishandisa kwekuisa ruzivo uye kuziva kwevatengi kunobatsira bhizinesi kutsvaga chigadzirwa uye kushambadzira mukati mazvomanzwiro kune imwe nzvimbo iyo inogona kukwikwidzana nevanokukwikwidza.
Kushandisa Amazon, zvinopesana nemirairo yekutengesa bhizinesi kune vanotengesa.Kunyange zvakadaro, Amazon inobvumira bhizinesi kugadzirisa maitiro avo ekutenga kusvika pane imwe nzvimbo yavanoda kushanyira webhusaiti yekambani. Semuyenzaniso,mutengi angatenga chimwe chigadzirwa kubva kune imwe kambani, asi kushandiswa kunowanika pawebsite yavo..
Zviziviso zvinowanikwa paAmazon zvakafanana neAdWords sezvo vanovimba nemashoko ekukosha. Vanotsigirwazviziviso zvinodiwa kubvira apo mutengesi anokwanisa kuashandisa kuti atarise makambani anotengesa mune zvimwe zvinhu. Mutengo wekunyora uri pasi peiyoyakabhadhara kutsvaga.
Amazon uye SEO kukosha
Kana imwe bhizinesi yatanga kuwedzera kuwedzera kwekutengesa, kune mikana yakawanda iyozvigadzirwa zvavo zvichabva zvatanga kuonekwa kumusoro pamusoro pekutsvaga ma Amazon. Somugumisiro, Google ichatora hukuru hwehutsika. Achishandisa chigadzirwakeywords sezvinonyanya kushandiswa kwekutsvaga kwezvinhu zviripo paGoogle inotungamirira vatengi kumiti yekambani.
Nekutsvaga kwezvisikwa, uye kutyaira vatengi kuAmazon, vatengi vanoziva kutiZvigadzirwa zvakasimba zvinowanikwa pane dzimwe nzvimbo. Inokurudzira pfungwa yekuvimba nevatengi. Kana kambani inotengesa michero yayo nenzira yakarurama,ivo vachava nechokwadi chekupa maitiro akanaka. Kudzokorora nyeredzi zvinoreva zvakawanda kune vasingadikanwi vatengi.
Kune zvakawanda zvinosanganisira vatengesi vasati vaita neAmazon:
Amazon inokanganisa marashi pasina chikonzero. Icho hachisi chokwadi sezvinoitwa nheyokunotsigira kune mumwe wechitatu chero bedzi mumwe achishanda mukati meAmazon mirayiridzo.
Amazon inotora bhizimisi kana inotora. Amai Amazon anobvunza vanhu kuti vasarudzepakati pekuve mutengesi wemusika kana mutengesi, asi chisarudzo chakakwana zvachose kumunhu anobatanidzwa.
Amazon inosiyanisa kubva kune imwe nzvimbo yekutengesa e-commerce. Ndiyo e-business store neinowanikwa mukati uye inoshandiswa nheyo dzinokosha seGoogle.
Kutengesa kuAmerica isarudzo-based strategy uye kushandisa simba rakakwana rekutonga.Nhamba dzakawanda dziripo kuAmazon nokuda kwebhizimisi kutengesa nekuwana vatengi. Muridzi wacho anosarudza nzira yakanakisisa kwavari.